दुई बर्षभित्र नेपालको बिजुली बङ्गलादेशले बाल्नेछ : राजदूत डा. मिश्र | NoteBazar
दुई बर्षभित्र नेपालको बिजुली बङ्गलादेशले बाल्नेछ : राजदूत डा. मिश्र
काठमाण्डौं। २१माघ, २०७६, मंगलवार / Feb 04, 2020 13:41:pm
भौगोलिक सीमाका हिसाबले नेपाल र बङ्गलादेशको दूरी २७ किलोमिटरको छ । असल र सुमधुर सम्बन्ध भएको बङ्गलादेश र नेपालको खानपान, सांस्कृतिक वातावरण, भौगोलिक अवस्था र भाषिक शब्द धेरै मिल्दोजुल्दो छ । हरेक दृष्टिले निकट यी दुई देशबीचको जनस्तरको सम्बन्ध, आपसी सहयोग, व्यापार–व्यवसायको आदानप्रदान र पर्यटन प्रवद्र्धनलगायत विषयमा बङ्गलादेशका लागि नेपाली राजदूत डा वंशीधर मिश्रसँग उनकै कार्यकक्षमा राससकर्मी नारायण ढुङ्गानाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
समस्यारहित सम्बन्ध रहेको दुई मुलुकको बीचमा आदानप्रदान किन कमजोर भइरहेको छ भन्नेमा म आउनेबित्तिकै ध्यानाकर्षण भएको थियो । कारण खोज्दै जाँदा पहिलो कुरा कनेक्टटिभिटीकै असहजता हो भन्ने मैले ठानेको छु । हामीसँग हवाई सम्पर्क त निरन्तर छ तर पर्याप्त छैन । पहिले तीन÷चार उडान थियो, केही समयमा एउटामा मात्रै सीमित भयो । अहिले बल्ल दैनिक दुई उडान छ । सत्र करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा दुई उडानले कति जोड्न सक्छ रु सबै जना जहाजबाट जाने भन्ने कुरा सम्भव पनि हुन्न । त्यसैले सडकमार्ग उनीहरुका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ तर उनीहरुलाई भारतीय भिसा चाहिन्छ । त्यसमा केही समस्याहरु छन् । उनीहरुलाई भारत घुम्न बहुप्रवेशाज्ञा मिल्छ तर भारतबाट नेपाल आउँदा भिसा रद्द गरिन्छ र अर्को ट्रान्जिट भिसा लिनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसकारण उनीहरु सीमामा पुगेर पनि फर्किएका उदाहरण छन् ।
अवश्य छ । रेल कनेक्टिभिटीको सम्भावनालाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ । सम्भावना उजागर हुँदै पनि गएको छ । जोगबनीबाट विराटनगर जोड्न सकिन्छ, यो व्यवस्थापन गर्न मात्रै बाँकी हो । बङ्गलादेशको पञ्चगढबाट न्यू- जलपाइगुडी हुँदै हाम्रो काँकडभिट्टासम्म रेल जाँदैछ । त्यसमा जोड्न सकिन्छ । त्यस्ता अन्य ठाउँ प्नि छन्, जुन नेपालबाट नजीक छ । एउटै रेलबाट बङ्गलादेश प्रवेश गर्न सकिन्छ र मालसामान पनि लैजान सकिन्छ । त्यो ठाउँलाई जोड्ने विषयमा पनि छलफल चलिरहेको छ । सन्धिसम्झौता गरेर व्यावहारिकरुपमा कार्यान्वयन गर्न जरुरी हुन्छ । रेलवेबाहेक जल यातायात पनि सम्भावना छ । हाम्रो सबै नदी गङ्गामा मिल्छ । त्यो गङ्गा यही बङ्गलादेशको पद्मा नदी हुँदै आउँछ । भारतले गङ्गाबाट पद्मा हुँदै मङ्गला र चितगाउँ बन्दरगाह पुगेर व्यापार गरिरहेको छ । हामी पनि गङ्गामा जोडिनासाथ सहज भइहाल्यो । यसरी हवाई सम्पर्कमा पनि विराटनगर, भद्रपुरलगायत क्षेत्रीय हवाई सेवाको सञ्जाल बढाउनेतर्फ पनि हाम्रो जोड छ ।
ठ्याक्कै भन्न सकिने अवस्था त छैन तर म के देख्छु भने दुई वर्ष्भित्रमा केही मात्रामा भने पनि नेपालबाट बङ्गलादेशमा विद्युत् पुगिसकेको हुन्छ । नेपालका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाले उत्पादन गरेको केही विद्युत् बङ्गलादेशमा सप्लाई भएको देख्न सक्छौँ । त्यसबीचमा धेरै लगानी पनि भइसकेको हुन्छ । त्यो सम्भावना नजीक बनेको छ ।
असाध्यै महत्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो । बङ्गलादेश कुनै जमानामा अनिकालग्रस्त थियो । मानिसको मृत्यु कहालीलाग्दो थियो । यहाँ बाढी, समुद्री आँधीले सधैँ सताउँछ । त्यसैले विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्टै मन्त्रालय बनाइएको छ । यस्तो देश खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भएर अब निर्यात गर्न थालेको छ । अविकसित राष्ट्रबाट मध्यम आय भएको देशमा उक्लिसकेको छ । हामी नेपालीले पहिलो सिक्नुपर्ने यही हो । यहाँ तीन बाली धान हुन्छ । हाम्रोमा किन हुँदैन रु तराईमा त होला नि ।
तपाईं अहिले पनि बङ्गलाबन्दको सीमानाका जानुभयो भने नेपालमा भारीका भारी मकै र आलु गइरहेको छ । कृषिमा उनीहरु कसरी फड्को मारे, त्यो हामीले सिक्नुपर्छ । मचान बनाएर माथि तरकारी तल माछा पालिरहेका छन् । प्रविधिको प्रयोग गरेर काम गरिरहेका छन् । ‘डिजिटल बङ्गलादेश’को स्लोगन बनाएर काम गरिरहेका छन् । आफ्नै स्याटलाइट ‘बङ्गबन्धु स्याटलाइट एक’ बनाइसके । यहाँका टेलिभिजनले आफ्नै देशको स्याटलाइट प्रयोग गर्ने भनेर कानून नै बनाइसक्यो । व्यावहारिक प्रविधिले कसरी यहाँको सामाजिक परिवर्तनमा भूमिका खेल्यो भनेर सिक्न सक्छौँ । शैक्षिक र अनुसन्धानको तहमा आदानप्रदान गरेर एक अर्काबाट सिक्न सकिन्छ ।
बिजुलीको बिल अनलाइनबाट तिर्न आग्रह 23/03/2020
देशभित्रै उत्पादन बढेपछि विद्युत् आयात ३३% ले घट्यो 16/03/2020
विद्युतमा नयाँ महसुल दर, आयोगले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दै 12/03/2020
दोर्दी ‘ए’ को २५ मेगावाट बिजुली चैतदेखि राष्ट्रिय प्रसारणमा थपिँदै, शेयर बिक्री खुला 12/03/2020
कालीगण्डकी प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ 02/03/2020
सिंगटी–लामोसाँघु प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध, मुआब्जा बढाउन माग 28/02/2020
सोलु करिडोर प्रसारण लाइनको रुट सार्न सकिंदैन : कुलमान घिसिङ 24/02/2020